Umhla My Pet » Kutheni Ufanele Zama Ukuthandana Umntu Ngubani na Type wakho
Ever had those times when your friends or family, eager to set you up on a date with someone they know, cela ukuba uhlobo lomntu uye?
Phantse wonke umntu unetyala nto-ukubanga ukuba ezinye uhlobo uhlobo okanye kukhethwa iqabane.
Ndisiva abantu bethetha ngalo lonke ixesha: "Mna kuphela umhla ayile-uhlobo abantu kuba mna ekuzobeni" okanye "ndikhetha umhla abantu career fields efanayo njengam."
Kodwa kuthekani ukuba eziveleleyo babambisa kuba ezingangeniyo "uhlobo efanelekileyo" lwakho?
Oku kwenzeka ngokuthe rhoqo, ingakumbi ukuthandana online. Wena adibana iprofayile obamba iliso lakho, kodwa emva kokufunda stats zabo ngokukhawuleza uqhubeke kuba ayilifaneli uluhlu lakho iqabane elifanelekileyo. Ngoko uhlobo yakho mde, amadoda dystrophy kodwa inkangeleko yakhe uthi nguye 5'6 kuphela "kwaye uphakathi kuphela abanomdla umthambo okanye uhlobo lakho Blonde, amabhinqa aseYurophu Mpuma yaye yeyona nenwele Australian. Musa ngokuzenzekelayo ukubhala umntu aqhuzulwa ngenxa yokuba musa kubonakala kwangoko ukuba umdlalo.
Kutheni ucinga ukuba kufuneka uqalise ukuthandana uhlobo oluthile lomntu?
Kufuneka ukuseka uxhulumaniso nomntu esekelwe ezifanayo, iinkolelo, and goals. Ukuba kugxininisa kakhulu ekufumaneni umntu ukwamkeleka imiya- ufuna ukulandela xa uthandana, ungaba bonakalise amathuba zakho ezinokuba ekwakheni ubudlelwane olukhulu.
Xa uvumela kuphela ngokwakho ukuba lomhla uhlobo lakho, ukuze nje kuphinda iipateni ubudala. Ukuba ubukhe yomhla uhlobo olufanayo lomntu kule minyaka ilishumi idlulileyo kwaye nanye ubudlelwane nisebenze, mhlawumbi kufuneka sicinge nje kuphela ndithandana uhlobo ekhethwayo yakho. Xa uthandana uhlobo olufanayo lomntu qho, ulwalamano idla iziphumo ekupheleni efanayo.
Ndithandana kuhlobo oluthile unokuba bekhululekile kwaye unokuxelwa kwangaphambil. ukuthandana nomntu na uhlobo lakho, someone different may allow you the opportunity to try new things and gain new life experiences. Ukuba uzama ndithandana nomntu zokuzonwabisa ezahlukeneyo kunawe, uyakwazi ukuzama imisebenzi emitsha onokuzonwabisa ngokwenene. Ndithandana nomntu ukusuka ilifa eyahlukileyo kunawe lunokwenza ukuba ukutya ezintsha kunye neenkcubeko.
Ukuze icace, Ndi ya cebisa ukuba uzame ukuthandana abantu abaneenkolelo amaxabiso ezingundoqo zangaphakathi efana kakhulu kuwe (ezifana inokuthenjwa, faithfulness, or generosity), ngokuchaseneyo ngokukhetha abanye ngokuthembela zangaphandle (ezifana imbonakalo, ethnicity, or social status). Kufuneka inamathele ekulandeleni namaqabane abanale amaxabiso ezifanayo core. Ukuba ufuna ukulihlawula phantsi kwiminyaka embalwa kunye nosapho, musani uqalise ukuthandana abantu akukho ukuzondelela kuqalisa intsapho. nokuba, ukuba unokumfumana umntu akanako ukungena uhlobo lakho kwephupha yeqabane emzimbeni, kodwa babelana iinjongo zexesha elide kunye neenkolelo, mhlawumbi kufuneka ubanike ithuba.
Emveni kwakho konke, nje soze ukwazi umdlalo yakho igqibelele kuba.